N’oge na-adịbeghị anya, anyị bipụtara otu akwụkwọ akụkọ na-agba ume na nyocha ebe ndị ahịa na-eguzogide mgbe niile ka a na-atụba ha nyocha. N'elu nke a bụ nnukwu nyocha nke Emailvision nyere banyere etu ndị ahịa na-atụ bọmbụ ga-esi nwee ike iwe iwe. Nnyocha YouGov na Emailvision jụrụ ndị na-azụ ahịa maka echiche ha banyere akwụkwọ ozi ire ahịa, wee mee ka a mata ihe ọjọọ ndị ahịa ahịa nwere ike ịme nke nwere ike iweta iwe iwe. Nnyocha ahụ chọtara: 75% kọrọ
Laa azụ n'April, anyị kwupụtara na Emailvision zụrụ SmartFOCUS. Ọ bụ ugbu a n'ọnwa Ọktọba na nsonaazụ nke mwekota ahụ abụghị ihe ịtụnanya, na-ejikọ Email, ọgụgụ isi na ndị ahịa na otu ngwọta. Emailvision ka eze mara ọkwa ntọhapụ nke Mgbasa Iwu ọchịagha Enterprise. SmartFOCUS nwere ihe nkesa ndị ahịa na ihe ntanetị nwere njirimara na ọrụ nchekwa data nke mere ka ọ dị mfe iwu ụlọ nkwakọba ihe data terabyte buru ibu ma belata ha ozugbo -
IHE: Emailvision bụ akụkụ nke SmartFocus. Ọ bụ ezie na ndị dike obodo anyị, ExactTarget, agbasawanyere ugbu a na United Kingdom na Australia, ha ka dị oke na mba ndị na-asụ Bekee. N'afọ mbụ a, anyị nwere ohere dị ịtụnanya izute ndị otu nwere ọgụgụ isi nke Emailvision. N'ịbụ onye dị na Clichy, France (nke dị na mpụga Paris), Emailvision nwere ike bụrụ naanị onye na-eweta email email zuru ụwa ọnụ. Enwere ike iji interface ha rụọ ọrụ na US English, UK
Mmadụ ole na-achọ onye maara ihe ị na-eme? Ugbu a… mmadụ ole na-achọ gị? Ya mere… ọ bụrụ na-ịchọrọ ịchọta gị na forntanetị maka ihe ị na-eme, gịnị kpatara ị ga-eji zụta aha gị dị ka ngalaba aha wee tinye blog na ya? E nwere ike ị gaghị achọ. Zụrụ ngalaba aha nke na-ebu ụzọ gosipụta ihe ị na-eme. Ruo mgbe ndị mmadụ mara onye ị bụ, nke a bụ otu